ရော်နယ်ဒိုကို မက်ဆီမယှဉ်နိုင်တဲ့ လူမှုကွန်ယက် ပရိသတ် Follower …? – Premier League Special
ရော်နယ်ဒိုကို မက်ဆီမယှဉ်နိုင်တဲ့ လူမှုကွန်ယက် ပရိသတ် Follower …?
ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူမှုကွန်ယက်တွေဟာ နာမည်ကျော်ကြားသူတွေအတွက် စီးပွားရေးဈေးကွက်နေရာတစ်ခုလိုဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ အကောင့်တွေ၊ page တွေမှာ ကြော်ငြာတွေထည့်သွင်းလာမှုတွေဟာလည်း လုပ်ငန်းရပ်တစ်ခုလိုရှိနေကြပြီး တစ်ချိန်က ရုပ်သံတီဗီတွေပေါ်ကကြော်ငြာဈေးကွက်ကိုလည်း စိန်ခေါ်လာခဲ့ကြပါတယ်။
အရင်အချိန်က လူကြည့်များတဲ့ နာမည်ကျော် ဇာတ်လမ်းတွေကြားမှာ ကြော်ငြာတွေထည့်သွင်းခဲ့ကြပေမယ့် အခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာ နာမည်ကျော်ကြားသူတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အကောင့်တွေဟာ ကြော်ငြာထည့်သွင်းရာမှာ သူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေဆီကို တိုက်ရိုက်ထိရောက်မှု ပိုမိုအားကောင်းလာတာကြောင့် ကြော်ငြာရှင်တွေက ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေနေရာမှာ အစားထိုးလာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် နာမည်ကျော်တွေရဲ့ တရားဝင် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ တွေမှာ ကြော်ငြာ ပိုစ်တစ်ခု တင်တိုင်း သူတို့ရဲ့ Follower အနဲအများပေါ်မူတည်ပြီး ကြော်ငြာခငွေကြေးတွေရရှိကြပါတယ်။
ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်ဒိုဟာ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးသမားတွေကြားထဲ လူမှုကွန်ရက်မှာ Followers အများဆုံးအဖြစ် ဦးဆောင်လျက် ရှိနေပါတယ်။ Facebook၊ အင်စတာဂရမ် နဲ့ တွစ်တာတို့မှာ ပေါ်တူဂီသားက Follower သန်း၂၀၀ကျော် ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၃၅နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ရော်နယ်ဒိုဟာ Facebookမှာ Follower ၁၂၄သန်း၊ တွစ်တာမှာ သန်း၉၀ ရရှိထားကာ အင်စတာဂရန်မှာ Follower ၂၅၂သန်းအထိ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ရော်နယ်ဒိုဟာ ကမ္ဘာ့အကျော်အမော်တွေ ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် အရီနာ ဂရမ်ဒီ နဲ့ ဒေါင်းနင်းဂျွန်ဆင် (The Rock) တို့ထက်တောင် ပိုများနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရော်နယ်ဒိုဟာ လူမှုကွန်ရက်အားလုံးမှာ Follower ၄၆၆သန်း ရရှိထားတယ်လို့ ပြသနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ဘောလုံးလောကမှာ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သူ မက်ဆီက Facebookမှာ သန်း၉၀၊ အင်စတာဂရန်မှာ ၁၇၅သန်းနဲ့အတူ အွန်လိုင်းမှာ ပရိသတ် ၂၆၅သန်းသာ ရရှိထားပါတယ်။ တွစ်တာမှာ မက်ဆီရဲ့ တရားဝင် အကောင့်တစ်ခုမှမရှိခဲ့တာကြောင့်လဲ အခုလို ရော်နယ်ဒိုနဲ့ အွန်လိုင်းပရိသတ်ကွာဟမှု များပြားနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဆီမှာသာ တွစ်တာအကောင့်ရှိခဲ့ရင် ပရိသတ် သန်း၂၀၀လောက်ထိ ပြတ်မှာ မဟုတ်တာကသေချာပါတယ်။ မှတ်တမ်းတွေအရ တွစ်မှာ မက်ဆီသာ တရားဝင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ချက်ချင်း ပရိသတ် ၆၅သန်းလောက် ရနိုင်တယ်လို့ တွက်ဆထားကြပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ မက်ဆီဟာ ရော်နယ်ဒိုရဲ့ နောက်မှာ ဒုတိယနေရာကနေသာရပ်တည်နေနိုင်ပါတယ်။
မက်ဆီရဲ့ ဘော်ဒါ နေမာကတတိယနေရာမှာရှိနေပြီး ပရိသတ် ၂၅၄သန်း ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အင်စတာဂရန်ကနေချည်းပဲ ပရိသတ် ၁၄၄သန်း ရရှိထားပါတယ်။ အဆင့်(၄)နေရာမှာ အဲဗာတန်ကွင်းလယ်လူ ဂျိမ်းစ် ရိုဒရီဂွက်ဇ်က Facebookမှာ ၃၁သန်း၊ Twitterမှာ ၁၉သန်း၊ အင်စတာဂရန်မှာ ၄၆သန်းနဲ့အတူ ပရိသတ် ၉၆သန်း ရရှိထားပါတယ်။ အဆင့်(၅)မှာ တော့တင်ဟမ် တောင်ပံလူ ဂါရတ်ဘေးလ်က ၈၈သန်း နဲ့ အဆင့်(၆)မှာ အသင်းဖော်ဟောင်း ရာမို့စ်က ၈၃သန်းနဲ့ အသီးသီး ရပ်တည်နေကြပါတယ်။
အီဘရာဟီမိုဗစ်က Follower ၇၉သန်း ရထားပြီးအဆင့်(၇)နေရာမှာရှိနေပြီး အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အပယ်ခံ အိုဇေးလ်က ၇၈သန်းနဲ့ အီဘရာဟီမိုဗစ်ရဲ့ နောက် အဆင့်(၈)နေရာ မှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
ရော်နယ်ဒိုရဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်မှာ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ ဘယ်နောက်ခံလူ မာဆယ်လိုက ၇၇သန်းနဲ့ အဆင့် (၉)နေရာမှာရှိနေပြီး မက်ဆီရဲ့ သူငယ်ချင်း လူးဝစ် ဆွာရက်ဇ်က ၇၃သန်းနဲ့ အဆင့် (၁၀)နေရာမှာ အသီးသီး ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာကတော့ ဘာစီလိုနာနဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်တို့နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ ကစားသမားတွေသာ လူမှုကွန်ယက်ရဲ့ ထိပ်သီး ၁၀ယောက်စာရင်းကို လွှမ်းမိုးထားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ေရာ္နယ္ဒိုကို မက္ဆီမယွဥ္ႏိုင္တဲ့ လူမႈကြန္ယက္ ပရိသတ္ Follower …?
ဒီေန႕ေခတ္မွာ လူမႈကြန္ယက္ေတြဟာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူေတြအတြက္ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ေနရာတစ္ခုလိုျဖစ္ေနခဲ့ပါၿပီ။ သူတို႕ရဲ႕ အေကာင့္ေတြ၊ page ေတြမွာ ေၾကာ္ျငာေတြထည့္သြင္းလာမႈေတြဟာလည္း လုပ္ငန္းရပ္တစ္ခုလိုရွိေနၾကၿပီး တစ္ခ်ိန္က ရုပ္သံတီဗီေတြေပၚကေၾကာ္ျငာေစ်းကြက္ကိုလည္း စိန္ေခၚလာခဲ့ၾကပါတယ္။ အရင္အခ်ိန္က လူၾကည့္မ်ားတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ ဇာတ္လမ္းေတြၾကားမွာ ေၾကာ္ျငာေတြထည့္သြင္းခဲ့ၾကေပမယ့္ အခုႏွစ္ပိုင္းေတြမွာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ အေကာင့္ေတြဟာ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းရာမွာ သူတို႕ရဲ႕ပရိသတ္ေတြဆီကို တိုက္ရိုက္ထိေရာက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာတာေၾကာင့္ ေၾကာ္ျငာရွင္ေတြက ရုပ္သံအစီအစဥ္ေတြေနရာမွာ အစားထိုးလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ေတြရဲ႕ တရားဝင္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ ေတြမွာ ေၾကာ္ျငာ ပိုစ္တစ္ခု တင္တိုင္း သူတို႕ရဲ႕ Follower အနဲအမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ေၾကာ္ျငာခေငြေၾကးေတြရရွိၾကပါတယ္။
ခရစၥတီယာႏို ေရာ္နယ္ဒိုဟာ ကမၻာ့ေဘာလံုးသမားေတြၾကားထဲ လူမႈကြန္ရက္မွာ Followers အမ်ားဆံုးအျဖစ္ ဦးေဆာင္လ်က္ ရွိေနပါတယ္။ Facebook၊ အင္စတာဂရမ္ နဲ႔ တြစ္တာတို႔မွာ ေပၚတူဂီသားက Follower သန္း၂၀၀ေက်ာ္ ပုိင္ဆုိင္ထားခဲ့ပါတယ္။ အသက္ ၃၅ႏွစ္ရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့ ေရာ္နယ္ဒိုဟာ Facebookမွာ Follower ၁၂၄သန္း၊ တြစ္တာမွာ သန္း၉၀ ရရွိထားကာ အင္စတာဂရန္မွာ Follower ၂၅၂သန္းအထိ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ ေရာ္နယ္ဒိုဟာ ကမၻာ့အေက်ာ္အေမာ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ အဆိုေတာ္ အရီနာ ဂရမ္ဒီ နဲ႔ ေဒါင္းနင္းဂၽြန္ဆင္ (The Rock) တုိ႔ထက္ေတာင္ ပုိမ်ားေနခဲ့ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေရာ္နယ္ဒိုဟာ လူမႈကြန္ရက္အားလံုးမွာ Follower ၄၆၆သန္း ရရွိထားတယ္လို႔ ျပသေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ေဘာလံုးေလာကမွာ ျပိဳင္ဘက္ျဖစ္သူ မက္ဆီက Facebookမွာ သန္း၉၀၊ အင္စတာဂရန္မွာ ၁၇၅သန္းန႔ဲအတူ အြန္လိုင္းမွာ ပရိသတ္ ၂၆၅သန္းသာ ရရွိထားပါတယ္။ တြစ္တာမွာ မက္ဆီရဲ႕ တရားဝင္ အေကာင့္တစ္ခုမွမရွိခဲ့တာေၾကာင့္လဲ အခုလို ေရာ္နယ္ဒိုနဲ႕ အြန္လိုင္းပရိသတ္ကြာဟမႈ မ်ားျပားေနခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ မက္ဆီမွာသာ တြစ္တာအေကာင့္ရွိခဲ့ရင္ ပရိသတ္ သန္း၂၀၀ေလာက္ထိ ျပတ္မွာ မဟုတ္တာကေသခ်ာပါတယ္။ မွတ္တမ္းေတြအရ တြစ္မွာ မက္ဆီသာ တရားဝင္အေကာင့္တစ္ခုဖြင့္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္း ပရိသတ္ ၆၅သန္းေလာက္ ရႏိုင္တယ္လို႔ တြက္ဆထားၾကပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ မက္ဆီဟာ ေရာ္နယ္ဒိုရဲ႕ ေနာက္မွာ ဒုတိယေနရာကေနသာရပ္တည္ေနႏိုင္ပါတယ္။
မက္ဆီရဲ႕ ေဘာ္ဒါ ေနမာကတတိယေနရာမွာရွိေနၿပီး ပရိသတ္ ၂၅၄သန္း ပုိင္ဆုိင္ထားျပီး အင္စတာဂရန္ကေနခ်ည္းပဲ ပရိသတ္ ၁၄၄သန္း ရရွိထားပါတယ္။ အဆင့္(၄)ေနရာမွာ အဲဗာတန္ကြင္းလယ္လူ ဂ်ိမ္းစ္ ရိုဒရီဂြက္ဇ္က Facebookမွာ ၃၁သန္း၊ Twitterမွာ ၁၉သန္း၊ အင္စတာဂရန္မွာ ၄၆သန္းနဲ႔အတူ ပရိသတ္ ၉၆သန္း ရရွိထားပါတယ္။ အဆင့္(၅)မွာ ေတာ့တင္ဟမ္ ေတာင္ပံလူ ဂါရတ္ေဘးလ္က ၈၈သန္း နဲ႕ အဆင့္(၆)မွာ အသင္းေဖာ္ေဟာင္း ရာမုိ႔စ္က ၈၃သန္းန႔ဲ အသီးသီး ရပ္တည္ေနၾကပါတယ္။ အီဘရာဟီမိုဗစ္က Follower ၇၉သန္း ရထားျပီးအဆင့္(၇)ေနရာမွာရွိေနၿပီး အာဆင္နယ္အသင္းရဲ႕ အပယ္ခံ အုိေဇးလ္က ၇၈သန္းနဲ႔ အီဘရာဟီမိုဗစ္ရဲ႔ ေနာက္ အဆင့္(၈)ေနရာ မွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။
ေရာ္နယ္ဒိုရဲ႕ ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္မွာ အခင္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းျဖစ္တဲ့ ဘယ္ေနာက္ခံလူ မာဆယ္လိုက ၇၇သန္းနဲ႔ အဆင့္ (၉)ေနရာမွာရွိေနၿပီး မက္ဆီရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း လူး၀စ္ ဆြာရက္ဇ္က ၇၃သန္းနဲ႔ အဆင့္ (၁၀)ေနရာမွာ အသီးသီး ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတာကေတာ့ ဘာစီလိုနာနဲ႔ ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္တို႕နဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ ကစားသမားေတြသာ လူမႈကြန္ယက္ရဲ႕ ထိပ္သီး ၁၀ေယာက္စာရင္းကို လႊမ္းမိုးထားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကန်တီရဲ့ ဒဏ်ရာ ပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်လို့ လမ်းပတ်အတည်ပြုပြောကြား
မက်ဆီထံကနေ အကောင်းဆုံး သင်ယူခဲ့တဲ့ ဗီလာရဲ့ ကြယ်ပွင့်ကစားသမားလေး